HomeChampions League‘Waanu Ogayn In Chelse Isku Dayi Doonto ..Sidii Baanay U Dhacday .. Wixii Intaas.’ Tiago
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid Tiago ayaa sheegay in “Riyadoodii” gaadhista ciyaarta u dambeysa ee horyaalka UEFA Champions League ay u rumawday si aan caad ku lingaxnayn.
Kooxda hogaanka La Ligaha haysa ayay taariikhda u gashay xallay kadib markii ay Koobka Yurubna ku dareen inay yimaadaan Finel , horena ay Gunaanad u joogeen Horyaalka Spain, haddii ay labadaba ku guulaystaana ay bog cusub oo taariikhda ah galli doono, kadib markii ay London dhexdeeda jiid-jiideen Chelsea kagana badiyeen 3-1, sidaasna hawada kaga saareen kooxdii Tababare Jose Mourinho.
Tiago, oo hore ugu soo ciyaaray Chelsea , ayaa ku nuux nuux saday in kooxdiisa ay la gudboon tahay inay rumaystaan inay goolal ku dhallin karaan meel ka baxsan gegidooda.
“Waa riyo. Waxaanu haysanaa awood nafsi ah iyo koox weyn, labadaas iskaashigooda ayaanu ku wada shaqaynaynaa. Imika waxaanu u soo baxnay ciyaarta Finel ka ee Lisbon Riyooyinkiina wey rumoobeen,” ayuu Tiago ku yidhi Sky Sports.
“Maaha wax fudud inaad kula ciyaarto Stamford Bridge laakiin waxaanu ogayn in Chelsea isku dayi doonto inay ciyaarta dardar galiso oo goolal dhaliso.
“Kalsooni ayaanu ku gallay maxaa yeelay waxaanu ogayn inaanu ku fiicanahay garoon kale ku ciyaarista. Waanu dhallinay, goolkayagii kadibna waxay ila tahay in Chelsea hoos u dhac ku yimid , anaguna markaas ayaan ka sii qaadnay kalsooni dheeraar ah.
“Muhiim ayay noo ahayd in qaybtii hore ku dhamaato 1-1. waxaanay ahayd sidii aanu jeclayn in xaaladuhu noqdaan – markay halkaas maraysay, waxaanu ogeyn in Chelsea isku dayi doonto inay raadiso goolal kale qaybta labaad.”
(Daawo Video) – Garoon Ciyaar Kooxo Waaweyn Dhex Mari Lahayd Loo Hakiyey Ololka Iyo Qiiqa Oo Dhamaan Geggida Ku baahay